Fomba fisaraham-panambadiana any Dubai | Law Firms Dubai
Ny fomba fisaraham-panambadiana any Dubai
Lalàna Silamo Silamo ho an'ny fisaraham-panambadiana
Ny lalàna Silamo Silamo dia mifehy ny raharaha fisaraham-panambadiana. Ny fitsipiky ny Sharia dia manasarotra ny fisaraham-panambadiana, raha tsy resy lahatra tanteraka ny mpitsara fa tsy hiasa ny sendika. Ny dingana voalohany amin'ny fizotran'ny fisaraham-panambadiana dia ny fametrahana raharaha ao amin'ny Family Guide and Section and Moral. Halefa tsy ho ela any amin'ny tribonaly ireo antontan-taratasy raha sendra manizingizina ny fisarahana ny mpivady. Ny tsy Silamo dia mety mitaky ny lalàna ny tanindrazany hampiasaina amin'ny raharahany manokana.
Ireo Expatriates dia afaka mangataka fisaraham-panambadiana
Ny tsy Silamo ary koa ireo mpila ravinahitra hafa dia afaka mangataka fisaraham-panambadiana any UAE na ao amin'ny tanindrazany (domicile). Mety mahafa-po ny manatona mpisolovava fisaraham-panambadiana efa za-draharaha, izay hanandrana hanao vahaolana am-pilaminana ho an'ny roa tonta.
Hilaza ny antony nanosika azy ireo hanapotika ny firaisana ireo mpivady. Azo inoana fa homena ilay fisaraham-panambadiana raha toa ka hitan'ny mpitsara fa mahafa-po ny antony. Ny sasany mino fa ny lehilahy dia mila mangataka intelo fotsiny ny fisaraham-panambadiana (Talaq) amin'ny fisaraham-panambadiana ary koa ny vady dia vitaina. Tsy mijoro amin'ny fomba ofisialy io fa fihetsika an'ohatra fotsiny. Etsy ankilany, azon'ny mpitsara atao ny misara-panambadiana noho ireo antony ireo, saingy tsy ara-dalàna ny fisaraham-panambadiana raha tsy omen'ny fitsarana izany.
Aorian'i Talaq, vady, eo ambanin'ny lalàna Sharia, dia tsy maintsy mijery an'i Iddat. Mitohy 3 volana i Iddat. Amin'izany fomba izany dia avela manery ny vadiny hiverina amin'ny sendika ny vadiny. Raha afaka ny telo volana dia mbola mila fisaraham-panambadiana ilay tovovavy, dia hofoanan'ny mpitsara ny firaisana. Ny lahy dia afaka mangataka ny fizotry ny Talaq amin'ny toe-javatra telo samihafa saingy afaka manizingizina fotsiny izy fa miverina indroa intelo.
Haharitra hafiriana ny fisaraham-panambadiana?
Izy io amin'ny ankapobeny dia voafaritry ny hamafin'ny olana, fa mety ho telo ka hatramin'ny enim-bolana, tsindraindray kokoa raha ny momba io tranga io.
Satria ny lalàna silamo Sharia dia mifehy ny fisaraham-panambadiana, mety ho sarotra ho an'ny mpivady tafasaraka ny manavaka satria ny mpitsara dia tokony ho resy lahatra tanteraka fa tsy handeha ny sendika.
Vantany vao nanapa-kevitra ny handefa fangatahana fisaraham-panambadiana ianao, dia manamafisa fa afaka sy misaina tsara ianao hanao ny safidy hafa. Ny olana dia apetraka ao amin'ny Family Guide Guide and the Moral ao amin'ny fitsarana Dubai. Fotoana fohy taorian'izay dia nisy mpanolotsaina iray nihaona tamin'ny mpivady alohan'ny nanombohany ny fomba fisaraham-panambadiana, mba hiresaka momba ny olan'izy ireo hahalalana raha mety hisy ny fampihavananao.
Amin'ny tranga dia ireo mpivady dia mponina any UAE ary na Silamo / Non-muslim, lalàna Sharia / UAE dia azo ampiharina amin'ny fisaraham-panambadiana.